Manchester United oo dooneysa inay la soo wareegto Labo Xidig oo ka tirsan Kooxda Leicester City | Dalkaan.com
Home ciyaaraha Manchester United oo dooneysa inay la soo wareegto Labo Xidig oo ka...
Manchester United oo dooneysa inay la soo wareegto Labo Xidig oo ka tirsan Kooxda Leicester City
Manchester United ayaa lagu soo waramayaa inay dooneyso inay labada Xidig ee kala ah Youri Tielemans iyo Caglar Soyuncu kala soo wareegto Leicester City inta lagu guda jiro suuqa kala iibsiga xagaaga soo aadan.
Tielemans, oo 24 jir ah, ayaa mar kale qaab ciyaareed cajiib ah ku soo bandhigay Foxes intii lagu jiray xilli ciyaareedkii 2021-22, isagoo u saftay 15 kulan tartamada oo dhan, isagoo ka qayb qaatay seddex gool iyo seddex caawin.
Laacibka reer Belguim ayaa heshiiska uu haatan kula joogo garoonka King Power Stadium waxa uu dhacayaa June 2023, inkasta oo ay jireen warar badan oo la isla dhexmarayay oo ku saabsan mustaqbalkiisa bilihii u dambeeyay.
Sida laga soo xigtay Fichajes , Man United ayaa dooneysa inay lasoo saxiixato Tielemans xagaaga soo aadan si ay sare ugu qaaddo dookheeda khadka dhexe, halka Red Devils ay sidoo kale isha ku heyso inay u dhaqaaqdo Soyuncu.
Qandaraaska 25-jirka ah ee Foxes ayaa sidoo kale dhacaya June 2023, waxaana jiray talooyin ku saabsan inuu u dhaqaaqo sanadka soo socda, iyadoo Real Madrid ay sidoo kale xiiseyneyso.
Ciyaaryahanka heerka caalami ee dalka Turkiga ayaa 98 kulan u saftay kooxda Brendan Rodgers tan iyo markii uu ka yimid Freiburg bishii Agoosto 2018, oo ay ku jiraan 16 kulan oo uu saftay tartamada oo dhan xilli ciyaareedkan.
Previous articleLiverpool oo Tixgalineysa inay u dhaqaaqdo weeraryahanka Real Madrid Luka Jovic
Next articleWiil Soomaali ah oo lagu dilay dalka Koonfur Afrika